Hal askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay weerar ay ISIS ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaala gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay weerar ay ISIS ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaala gobolka Bari
Hal askari oo katirsan ciidamada Puntland oo ku dhintay weerar ay ISIS ku qaaday saldhig ciidan oo kuyaala gobolka Bari
May 29, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maleeshiyada ISIS ayaa ku dhuumanaya gobolka Bari. [Sawirka: Furat]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Hal askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhintay weerar ka dhacay tuulada Canjeel ee gobolka Bari xalay, oo ay qaaday maleeshiyada ISIS.
Fowsi Xasan Ismaaciil, oo ah taliyaha ciidamada Puntland katirsan ee weerarka lagu qaaday, ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyada ISIS ay saddex jiho kasoo weerareen saldhiga ciidamada balse si buuxda ay isaga daafaceen.
Saddex qof oo shacab ah oo labo kamid ah ay yihiin dumar ayaa ku dhaawacmay weerarka, sida uu sheegay taliyuhu.
Maleeshiyadii ciidamada soo weerartay ayaa dhaawac kasoo gaaray weerarka, Fowsi Xasan Ismaaciil ayaa intaas ku daray.
June 9, 2018 Mareykanka oo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika oo dhinacyada dibada ee ku lugta leh ka codsaday in ay joojiyaan farogelinta arrimaha Soomaaliya
Geneva-(Puntland Mirror) Isbedelka Cimilada ayaa khatarta ugu weyn ku ah caafimaadka dunida qarniga 21-aad, sida ay sheegtay haayada caafimaadka adduunka ee WHO. Warbixin dhowaan la soo saaray, waxay WHO ku sheegtey in xirfadleyda caafimaadku uu [...]
Eritrea’s government has accused Ethiopia of launching an attack on its territory, but the extent of the assault was still unclear and there was no immediate response from Ethiopia. Eritrea, which won independence from Ethiopia [...]
Somali Premier declares his presidential bid
Mogadishu-(Puntland Mirror) The current Premier of Somalia Omar Abdirashid Ali Sharmake on Monday has declared publicly his bid for the Somali President in 2016. “I have decided to run Somali president in the October 2016 [...]